Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV 🥇
Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019
Ugbu a, anyị na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi
Companylọ ọrụ Dubai - mbanye maka United Arab Emirates
Mwepu maka Izi oru na Dubai 2019. Anyị na-ewere ọrụ izi ihe na Dubai. Anyị na-enyere expats aka ugbu a iji nweta ihe omuma banyere obibi na Dubai. Na ọrụ dị ịtụnanya maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai. N’eziokwu, Citylọ ọrụ Dubai City na-enyere ndị nkụzi aka inweta ọrụ. Anyị na ndị otu na - agụ akwụkwọ na UAE maka ibi na ịrụ ọrụ na Dubai ndu. Anyị nwere ike ịnye gị ọrụ ọrụ. N’iburu nke a n’uche, anyị na-edetara gị akụkọ bara uru gbasara otu esi achọ ọrụ nkuzi na Dubai.
Yabụ na ọtụtụ ndị mmeri na ndi nkuzi n’iru n’iru nwere Nkuzi ma o bu bachelor na Mmụta Nkịtị. Nke kachasị mma gụsịrị akwụkwọ na mahadum kachasị elu gburugburu ụwa. Itinye ya n’ụzọ ọzọ achọtara ihe ndekọ nke ihe ịga nke ọma onye isi mmụta agụmakwụkwọ pụtara ìhè. Bụ onye kachasị achọgharị na Dubai City. Ikwesiri ileba anya na anyi Njikọ ozi Dubai.
Ndị India na-eburu ibu na UAE
Maka otu ihe, ahụmahụ nke ịkụziri ụmụ akwụkwọ bụ azịza kasị mma maka ọrụ gị. Ihe dị mfe site na Grade 8 ka12. Ya mere ọ bụghị onye ọ bụla ga-enwe ike ịchọta ọrụ na Emirates. N’okpuru ọnọdụ ndị a, a na-ekwu okwu ọma nke e dere na asụsụ Bekee jiri ọkacha mma IELTS Band 7 Ọmụmụ. Onye nkuzi ọ bụla ga-enwerịrị nke ọma Isi ihe banyere asụsụ Arabia.
Ya mere nweta oru a na Middle East Ikwesiri inwe afọ 3 opekata mpe nke mmụta izizi ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Imirikiti ndị na-ewe ndị ọrụ na ndị na-ahụ maka HR na-agbakarị ajụjụ ọnụ mba ndi ozo na Dubai kama ịntanetị. Ya mere na onye ọrụ gị na mbụ, ịkwesịrị ịnweta nkà mmụta nlekọta nke klas nke ọma na ha dị mkpa.
Ọrụ nkụzi na Dubai maka India
Mwepu maka Achingkụzi ọrụ na Dubai 2019
Maka nke a, ụlọ ọrụ anyị na-enye enyemaka maka ọrụ nkụzi na Dubai maka onye India. Anyị na arụ ọrụ na elu asọmpi Arab Market. Ebumnuche anyị bụ itinye ọtụtụ ndị nkụzi India ka anyị nwere ike. Ndị India hụrụ n'anya na-achọ ọrụ nkuzi n'ụlọ akwụkwọ ndị dị na Dubai American. Typedị ndị a na-ewe mmadụ n'ọrụ ama ama na Dubai na Abi Dhabi. Ọzọkwa, onye nkụzi India ọrụ na Dubai maka ndị na - ebi akwụkwọ na - aghọ ezigbo ahịa.
N'ikwu okwu n'ozuzu, itinye maka ọrụ nkuzi na Dubai kwesịrị ịbụ ihe siri ike. Enwere otutu ohere maka ndi ohuru ohuru na UAE. Ndị si mba India bịa. Na-achọ ihe kacha mma n'ụlọ akwụkwọ na mahadum. E nwekwara ọtụtụ ọrụ nkụzi na Dubai Indian School. Ya mere ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ na India.
I nwekwara ike inweta a ọrụ na Dubai City. Mana ọrụ ndị nkuzi na ụlọ ọrụ Dubai nwere ike belata obere ma e jiri ya tụnyere mahadum dị elu. Nanị ndị si Asia na-abịa Dubai ma nwee umuaka. Ha choro ezigbo muta ezi na ulo ha. Yabụ bido ịchọ ụdị isiokwu a.
Ụdị ọrụ nkuzi na Dubai na Abu Dhabi?
izi ohere ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. N'ikpeazụ, mahadum bụ ụlọ ọrụ dị iche iche ma ha bara ụba nke ndị ọrụ ntorobịa na-eto eto. Nyere isi ihe ndia, ewu ewu ụzọ ọpụpụ maka ọrụ na-akụzi ohere na Dubai. Ikwesiri ịtụle ihe niile na nke ahụ gụnyere ESL ohere ọrụ, nkuzi nkuzi na Dubai na Abu Dhabi, ndi mmadu na-eme ndokwa maka ule mba uwa.
Maka ndị ọrụ India na-achọ ndị chọrọ ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ma ghọọ ndị ọkachamara. E nwekwara ọtụtụ agụmakwụkwọ ọzọ arụ ọrụ na Dubai na-atụle. Dika edeputara otutu umu akwukwo ndị bi na Dubai na 2018 nwere elu Bekee. N'ikwu okwu n'ozuzu UAE, enwere ohere na Middle East. Naanị ịlanarị na-agbalị ịkụziri ndị ọzọ okwu na Bekee. Maka ọtụtụ akụkụ, ọrụ gụnyere mgbakọ na mwepụ, sayensị, nkà, na Nkà na ụzụ Google.
Mwepu maka nkuzi nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV na Emirates. Dubai nwere ihe ngosi dị mma dịka ọmụmaatụ ịtụnanya uwe ojii ike ọ bara uru ịnweta anya.
Ụlọ akwụkwọ kacha elu na UAE
Ebee ka ị nwere ike ịhụ ọrụ nkuzi na Dubai
SP Jain School nke Global Management
SP Jain School of Global Management, dị mkpa ịghọta na ụlọ akwụkwọ a bụ otu Ndi Eshia kacha-elu ụlọ akwụkwọ azụmahịa ụwa. Kama nke ahụ, ụlọ akwụkwọ nchịkwa a na-eburu ya n'ọrụ iji nyere aka ndi mmadu ka ha nweta akwukwo MBA. Kpamkpam, ụlọ akwụkwọ a na-achọ ndị isi azụmaahịa zuru ụwa ọnụ na India na United Arab Emirates maka ndị na-achọ ọrụ na narị afọ nke21.
Ụlọ akwụkwọ ndị a dị ịtụnanya na-ewere ụmụ akwụkwọ mba ụwa nile. Ụlọ ọrụ a na-agba ọsọ campuses n'obodo ndị dị na Dubai, enyere ndị na-asụ Mumbai aka n'India, Singapore, na Sydney. N'iburu nke a n'uche, ị kwesịrị ịma na SP Jain na-enye ụmụ akwụkwọ ya ngwugwu zuru oke maka ụmụ akwụkwọ. Nwere ike hoo haa nweta mmụta dị ịtụnanya ọ bụkwa ụlọ akwụkwọ nchịkwa ụwa niile.
Njikwa a ụlọ akwụkwọ achụmnta ego dị obere na azụmahịa UAE. Maka nke a, SP Jain ewepụtala onwe ya nke ọma na ha na-achọ aghụghọ nchịkwa dị elu. Ejikwala ezigbo echiche dị n’etiti Ndị na-achọ ọrụ India na Gulf. Nke a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ azụmahịa kachasị mma nke ụwa maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa. SP Jain bụ otu n'ime 'Top 20 'na Forbes'Ezigbo ụlọ akwụkwọ ụwa.
Jikọọ otu n'ime usoro MBA kasị mma
Schoollọ akwụkwọ a kacha mma maka Ogologo MBA MBA na 2013-2019. Ọ bụrụ na i sonyere ha, ị ga-anọ n'etiti ndị kachasị mma nke 100 Businesslọ akwụkwọ azụmahịa na ụwa. Ọtụtụ n'ime ndị mba ọzọ na-enweta ọrụ na Dubai agachaa ebe ahu. Economist dere ezigbo nyocha ụlọ akwụkwọ a na 2015. Ọzọkwa, egosipụtara ha na Mmemme Mmepụta 'Top 100 Global MBA Global MBA Mmemme (2011 na 2012).
Mgbe ị na-amalite ha, e nwere ọtụtụ ihe dị mma. Dịka ọmụmaatụ, SP Jain's undergraduate and postgraduate business program are one of ihe kacha mma na Dubai na Eshia. Maka nke a, ụlọ ọrụ nke Ngalaba Mmụta / Tertiary Education Quality & Standards Agency (TEQSA), Australia, nwere ikikere nke Council of Private Education, Singapore, na Ihe Ọmụma na Ọzụzụ Ndị mmadụ. Dubai bu ebe nwere mmanu obibi. Site na mmemme ndị a, ị ga-ahụtarịrị ọrụ nkuzi na Dubai.
Ntụgharia maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV ka ọ bụrụ University nke SP JAIN.
Mahadum Murdoch na Dubai, UAE
Tinye na CV gị na Murdoch University na Dubai. Ọzọ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ na UAE. Nke a bụ n'ezie otu n'ime ndị isi na mahadum Dubai na-akụzi ọrụ na Dubai. Ọzọkwa bụ ebe ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ si n'akụkụ nile nke ụwa. Maka onye a si India. Ndi mmadu na-amu akwukwo na Murdoch buru oke onu iche na United Arab Emirates.
Nnukwu ewu maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọrụ Pakistani, n'ọnọdụ ndị a, mahadum dị nnọọ mpako na aha njikwa ụwa anyị. N'ihi nke a, mahadum nwere nkà n'ịkụzi ihe maka ndị ọrụ nlekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Otu n'ime Mahadum kachasị mma maka ndị nchọpụta na ndị isi nchịkwa. Nke kacha mma maka nwata akwụkwọ afọ ojuju na Dubai na otu nke kachasị mma ịmalite ọrụ nkuzi na Dubai.
Mahadum Murdoch dị na Dubai bụ nke ọma n’etiti ndị na-azụ ahịa azụmahịa na UAE. Ebe a di n'ime nnukwu obodo Dubai Obodo Ọmụmụ International. Nnọọ nnabata maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ Dubai na ndi bi na Abu Dhabi. Mahadum amalitela na 2007 wee mara ngwa ngwa maka ndị ọrụ mpaghara. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụzi ọrụ na Dubai, ị ga-eziga CV gị na Mahadum Murdoch.
Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV na MURDOCH University.
Tinye maka ụlọ akwụkwọ Al Dar University
ọzọ ebe ị nwere ike ịmalite ọrụ bụ Al Dar University College (ADUC). Nke a bụ kọleji mahadum maka ụmụ akwụkwọ toro eto. Otu n'ime ndị kacha ochie na otu n'ime ndị izizi ọrụ na Dubai na ebe mmụta maka ụmụ akwụkwọ. E guzobere Mahadum Al Dar University na 1994. Ebe ọ bụ na Mahadum mepere ụzọ maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ abụwo mbọ anyị iji jikwaa ụmụ akwụkwọ mba ụwa. Ọmụmaatụ Ndị agha South Africa na Dubai. Na-agbalị itinye akwụkwọ a na mahadum dịka Onye Ozizi ọhụrụ.
A maara ADUC nke ọma dị ka onye ndu nwere amamihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ yana ọkwa dị elu maka ọmụmụ ihe ọhụrụ. Withrụ ọrụ na Mahadum a bụ ọrụ siri ike ijikwa. Maka nke a, ADUC na-achịkwa ọtụtụ ebumnuche maka ụmụ akwụkwọ. Ọzọkwa, ha na-aga n'ihu n'ịchụso usoro nchịkwa azụmaahịa ọhụụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịkwaga Dubai. Al Dar University bụ otu n'ime ndị kasị mma n'akụkụ mpaghara na ụwa.
Ịkụzi ọrụ na Dubai na Mahadum a mara nke ọma na UAE. Gbaa mbọ hụ na ịmalitegharị gị dị ka enweghị ntụpọ. Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV na University University nke ALDAR.
Ọrụ na BITS Pilani
Ebe ọzọ dị mma ebe i nwere ike itinye maka ọrụ bụ Birla Institute of Technology and Science, Pilani. Otu n'ime ihe kachasị mma maka ọrụ nlekọta ndị India na-arụ ọrụ na Dubai. Ụlọ ọrụ Birla Institute of Technology na Science, Pilani bụ n'ezie n'etiti ndị ebe kachasị mma iji rụọ ọrụ maka ndị inyom na-achọ ọrụ gburugburu ụwa.
BITS Pilani bụ ụlọ ọrụ India nile maka agụmakwụkwọ ka elu. Ikwu okwu n'ozuzu onye na-ewu ewu n'etiti ndị nnọchiteanya nke Asia. Ebumnuche bụ isi BITS bụ ịzụ onye ọ bụla maka izi ọrụ na Dubai. Ruo ugbu a, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-enwe ike ịmepụta BITS n'ọdịnihu. Birla na-achọ itinye ọtụtụ n'ime echiche mkpakọ. N'ikwu ya n'ozuzu, ha na-azụ ndị mmadụ n'ime usoro ọhụụ na iberibe ozi.
Ụlọ akwụkwọ a bụ nrọ nke mezuru maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ ya ndị na-achọ ọrụ na Dubai. Ọ bụrụ na ị na-achọ onye sonyere na nnwere onwe ndị India. Mahadum a bụ n'ezie maka gị. Y’oburu na nsogbu a n’enwe mmeko nke gi na ahuma gi. Shouldkwesịrị ịgbalị ịrụ ọrụ na Mahadum Birla. Mahadum ahụ malitere na 1900s dị ka obere ụlọ akwụkwọ. Mgbe ahụ kwagara n'ime otu kọleji maka agụmakwụkwọ dị elu. N'ikwu okwu n'ozuzu, ha toro dị ịtụnanya sitere na ngalaba Humanities ruo na Injinịa.
Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV na Mahadum BIT.
Ọrụ na Heriot-Watt University
Ulo akwukwo nke UK na Heriot-Watt. Mahadum a bụ ọkachamara ma bụrụ ọkachamara na-asụ ụzọ na Mahadum na Dubai, Malaysia, na UK Nke a bụ University nke ọnụ ọgụgụ zuru ụwa ọnụ maka ndị ọrụ UK. Na-ekwu okwu n'ozuzu arụ ọrụ na Dubai dika onye nkuzi. Dị ka UK na ụwa ama na Mahadum ha mepụtara nyocha na ndị gụsịrị akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ukwuu. Mahadum Heriot-Watt ugbu a na - ewekwa akwụkwọ maka ọrụ nkuzi na Dubai.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, Ụlọ Ọrụ Heriot-Watt jidere ya na-emeghe njem-na ụbọchị nyocha. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ọtụtụ nhọrọ ebe i nwere ike ịbịa ma ọ bụrụ na ị nọ ugbu a na Dubai na ịchọ ọrụ nkụzi na Dubai. N'ikwu okwu n'ozuzu, ị nwere ike izute ndị ọrụ agụmakwụkwọ na-agwa ha okwu ihu na ihu banyere otú e si aghọ onye nkụzi UAE. Mgbe ahụ mụta ihe mmemme maka ndị na - achọ ọrụ na ụmụ akwụkwọ mba ụwa. Ọzọkwa, ị nwere ike ịgwa ndị na - agụ akwụkwọ na Mahadum Heriot-Watt maka itinye akwụkwọ na agụmakwụkwọ.
Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai 2019 - Bulite CV na HERIOT WATT University.
MODUL University na Dubai
Mahadum MODUL nọ na Dubai bụ onye raputara nke ọma Campus. Ohaneze na ekwu emi odude ke Dubai Multi Commodities Center DMCC, Jumeirah Lakes Towers. Mahadum MODUL nke dị na Dubai kwudoro na ya bụ otu ọrụ kacha mma ịkụziri ọrụ na Dubai.
Nyere isi okwu ndi a, nzube azụmahịa a dum bu ibu mahadum 1st Austrian di na Middle East. Ọzọkwa, ha na-ele anya ka a mata ha dị ka mahadum ndị isi mba ụwa maka ahia mba uwa. Nwere ike itinye akwụkwọ maka ọrụ nkuzi na Dubai na ngwa ngwa. Maka ọtụtụ akụkụ, Mahadum anọwo na-enye ọtụtụ nhọrọ maka ụmụ akwụkwọ na ndị ọgbọ. Otu n'ime ihe atụ bụ mmemme agụmakwụkwọ dị elu. Na njedebe ikpeazụ, ị kwesịrị ile anya BBA, BSc, MSc, MBA & PhD.
Otu n'ime ọzụzụ kacha mma ebe ị ga - abanye ụlọ ahịa na Dubai. Ikwesiri igba mbọ hụ na ị ga-ahụ ngalaba zuru ezu na Dubai. Ya mere, anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara mahadum a. Dika eziokwu, ị nwere ike ijide n’aka na mgbe ị gụchara Mahadum a. Ị ga mata ọrụ na UAE.
Nchịkọta maka ọrụ nkuzi na Dubai na 2019. Bulite CV na University MODUL.
Ụlọ akwụkwọ SAE na Dubai
SAE bụ otu n'ime ebe kacha mma maka ụmụ akwụkwọ ọhụrụ. N'ikwu ya, ha na-enwe ihe karịrị 55 n'ogige dị na mba 28 bụghị naanị na Dubai. N'okpuru ọnọdụ ndị a, Mahadum SAE bịara mara nke ọma na ahịa UAE. Dubai City anọwo na-atọ ntọala ụwa maka agụmakwụkwọ mgbasa ozi okike. Na Dubai City, anyị ji mpako na-enye SAE asambodo na diplọma dị na Dubai.
N'otu oge ahụ, ha na-enweta otu n'ime akara ugo mmụta bachelọ kacha mma gafee ebe a na-akụzi 5. N’egwuregwu n’egedeegwu n’iru ya na ihe a na-ewepụta oge na Dubai dị ka ebumnuche a. Nwere ike ịchọta mmebe na ihe nkiri na egwuregwu. Y’oburu achọ rỌ bụ ọrụ na Dubai na Qatar. Nke a bụ ebe kachasị mma maka ndị ọpụpụ na United Arab Emirates.
Ntinye akwụkwọ maka Nkụzi Ọrụ na Dubai na 2019. Bulite CV na Mahadum SAE. Ugbu a ahịa ohuru nke bu cryptocurrency ha na - akpọkwa naanị ndị agụmakwụkwọ ka elu.
Mmechi maka a nkuzi ọrụ Dubai
Ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ nkụzi na United Arab Emirates. Ụlọ ọrụ anyị na-enye aka aka mgbe niile. E nwere ọtụtụ Ozi mmeba na Dubai ebe ị nwere ike itinye nkọwa nkeonwe gị. E nwekwara ọtụtụ mba ndị ọzọ dịka Saudi Arabia ụlọ ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ ebe ị kwesịrị iziga CV gị.
Ọ bụrụ na ị bụ ichoro ezigbo oru ma i si mba ofesi. Shouldkwesịrị ile anya na a ọrụ na Dubai n'ihi na ndị Filipino expat. Ebe ị ga-achọta ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ọrụ na-achọ na UAE. Ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ọrụ ma ọ bụghị na-achọ ọrụ nkụzi na Dubai. I kwesịrị ile anya ọrụ ụgbọala na Dubai.
Ọzọkwa, i kwesịkwara ile anya nke ọma ọrụ ụgbọ elu na-enye na Emirates. Ebee ka ntuziaka zuru oke na-ekpo ọkụ rute otu n’ime ụlọ ọrụ kacha mma na UAE?. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na United Arab Emirates na-arụ ọrụ na Dubai. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ahịa ọrụ Dubai. Ụlọ ọrụ anyị na Dubai enyere ọtụtụ ụlọ ọrụ na UAE.
Ọzọkwa, anyị bụ enyere nwanyị aka na-achọ ịchọta ọrụ na Dubai. Maka na anyị na-enyere ndị mmadụ aka inweta ọrụ na Dubai. Anyị na-enyere onye ọ bụla aka inweta ọrụ. Malite ọrụ nyocha na Dubai na anyị Ndepụta nke ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọrụ.
Ịkụzi ọrụ na Dubai 2019
Ugbu a, anyị na-anata akwụkwọ maka ọrụ nkụzi na Dubai
Chọta a Job na Dubai City, ihe ijuanya na ị nwere ike ịnweta ya. Naanị ịmalite ọrụ ọhụrụ Dubai! Otu ihe doro anya iji nweta ọrụ na Emirates. Enwere otutu ebe ị na-ewe ọrụ. Ọrụ na Dubai ọrụ saịtị na nyocha oru nyocha n'ugwu Gulf. Ha bara uru ka itinye ha na CV gị.
Bulite Na-amalite gaa Obodo Na-arịwanye Elu Na Ụwa! - Ụlọ ọrụ Dubai City
Dubai City Company ugbu a na-enye ezi nduzi maka ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, buru nke a n'uche, ugbu a ị nwere ike ịnweta nduzi, Atụmatụ na ọrụ na United Arab Emirates na iji asụsụ gị.